ओली संग असन्तुष्ट भीम रावलले यस्तो निर्णय लिँदै ? बोलाए छुट्टै बैठक « Etajakhabar
काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि असन्तुष्ट रहँदै आएका नेता भीम रावलले मंगलवार छुट्टै बैठक बोलाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टी विभाजन रोक्न गठन गरेको कार्यदलको बैठक बस्दै छ । ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा रावलले बैठक बोलाइएको एक नेताले बताए ।
आजको बैठकमा १० बुंदे सहमतिको विषयमा व्यापक छलफल हुने भएको छ । नेकपा एमालेलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउँदा सुदुरपश्चिम इन्चाज भीम रावल हुनेभएपनि अध्यक्ष ओलीले पार्टीको उपाध्यक्षको मात्र जिम्मेवारी निभाउन निर्देशन दिएपछि उनी असन्तुष्ट भएका छन् । उनले दुई दिन केन्द्रीय समितीको बैठक पनि वहिष्कार गरे । दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै नेकपा एमालेले सोमबार उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र लेखराज भट्ट रहेका छन् । पछिल्लो समय एमालेमा दस बुंदे कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेताहरु विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी तेस्रो धारका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले १० बुँदे कार्यान्वयको विषय उठाएपछि चर्काचर्की भएको थियो ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा दुईरदुईपटक विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै पुनस्र्थापना ग¥यो । के संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्षज्यू कतिपटक उठबस गर्नुपर्छ ?’ बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सरकार गिराउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाहीको आवाज उठेपछि केहीबेर हंगामामै नै भएको थियो । दोहारो सवाल जवाफ चलेपछि केहीबेर बैठक त ना वपूर्ण बनेको थियो । तर, पछि शीर्ष नेताले यसबारेमा पनि छलफल गर्ने भन्दै कुरा मिलाएपछि बैठक निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।